एजेन्सी -मानिसहरु विभिन्न स्टाइलमा सम्भोग गर्न मन पराउँछन् । तर, एक अध्ययनअनुसार पुरुषमाथि महिला रहेर गरिने (वुमन अन टप) सम्भोग सबैभन्दा खतरनाक सेक्स पोजिसन रहेको पाइएको छ ।
क्यानडाका अनुसन्धानकर्ताहरुले आधाभन्दा बढी लिंगको फ्र्याक्चर यस्तो सम्भोग पोजिसनका कारण भएको पत्ता लगाएका थिए । यस्तै, अर्को पोजिसन ‘डग्गी स्टाइल’ का कारण २९ प्रतिशतमा लिंगको फ्र्याक्चर हुने समस्या देखिएको छ ।
अधिकांश पुरुषले प्रयोग गर्ने मिसनरी पोजिसन अर्थात् पुरुष माथि रहेर गरिने सम्भोगसमेत सुरक्षित नरहेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ । २१ प्रतिशत लिंग फ्र्याक्चर यस्तो स्टाइलका कारण हुने गर्छ ।
पुरुषलाई पीडा सुरु हुनेबित्तिकै सेक्स नरोकिने भएकाले पनि ‘वुमन अन टप’ पोजिसन बढी खतरनाक मानिन्छ । सेक्सका दौरान महिलाको तौलले पुरुष लिंगमा भार पार्ने भएकाले पनि समस्या सुरु हुनेबित्तिकै रोकिने सम्भावना कम हुन्छ । यसको बदलामा पुरुष माथि रहने पोजिसनमा भने पुरुष तत्कालै अलग हुन सक्छ ।
यो अध्ययन निरन्तर १३ वर्षसम्म गरिएको थियो । यसक्रममा डाक्टरहरुले ब्राजिलका तीन अस्पतालमा यौनांग फ्र्याक्चरको समस्या लिएर पुगो ४४ पुरुषको पोजिसनका बारेमा जानकारी लिएका थिए । यसमा २८ जनाले सेक्सका क्रममा लिंगमा समस्या आएको स्वीकार गरेका थिए । अचम्म त के थियो भने आधाभन्दा बढी मानिसले लिंग फ्र्याक्चर भएको आवाज पनि सुनेका थिए । यसपछि लिंग सुनिएको र पीडाको समस्या पनि सुनिएको थियो ।
सेक्स कसरी लामो समय गर्ने ? यस्ता छन् उपाय
Posted: 2018-09-08 14:19:51
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । किशोरावस्था तथा युवावस्थामा यौनइच्छा सबैभन्दा तीव्र र बढी हुने भए पनि उनीहरूले गर्ने यौन व्यवहारमा रोकमात्र लगाइन्छ । अहिले युवाहरूको विवाह हुने उमेर बढी हुँदै गए पनि यौनेच्छा मेट्ने बाटोचाहिँ खुला गरिँदैन । हस्तमैथुन पनि त्यसैको चपेटामा परेको छ र यस विषयमा कतिपय गलत धारणा पनि छन् ।...
सांस्कृतिक प्रस्तुति ‘फ्लावर अफ सिल्क रोड’
Posted: 2018-09-08 06:57:38
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ — दुवै हातमा बीस मिटर लामो रेसमको सल फर्फराउँदै नाच्दा उनी परीकथाकी राजकुमारीझैं लाग्थिन् । नीलो–सेतो चिनियाँ जामामा सजिएर उनले ‘डिप नाइट’ शीर्षकमा लोक नृत्य देखाइन् । सांस्कृतिक प्रस्तुति ‘फ्लावर अफ सिल्क रोड’ का लागि चीनबाट नेपाल आएकी लिउ यानयानले पेकिङ ओपेरा र पेकिङ डान्सको संयुक्त रूप प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।...
यि हन, नेपालमा सेक्स टोय प्रयोग गर्ने चर्चिच कलाकारदेखि नेतासम्म
Posted: 2018-09-06 16:10:33
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । यौनका बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक–फरक बुझाइ हुन सक्छ, तर एउटा समान धारणा के हुन्छ भने सबै यसमा गोप्यता चाहन्छन् । यौन शरीरको यस्तो आवश्यकता र चाहना हो जसलाई मान्छेले सधैँ नियन्त्रणमा नराख्न पनि सक्छ । चाहेको वेला यौन चाहना पूर्ति नहुन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा विकल्पका रूपमा सेक्य टोयहरू रोजाइमा पर्न थालेका छन् । नेपालमा पनि सेक्स टोयको माग बढ्दै छ ।...
सेक्स र स्वास्थ्य: विश्वमा हरेक दिन झन्डै ११ करोड पटक सेक्स !
Posted: 2018-09-01 06:28:32
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं- सेक्सको विषयमा नेपाली समाज त्यति खुल्न नसके पनि धेरै चिन्तित छ । मान्छेको सेक्स जीवन जीवनको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । हरेक मान्छे हरेक क्षण आफूलाई सेक्समा सक्षम र स्वस्थ्य राख्न चाहन्छ तर पनि त्यो सम्भव नभइ रहेको हुन्छ । यसले मान्छेलाई बढि नै चिन्तित बनाएको हुन्छ । ...
नितिनको निर्देशनमा फिल्म ‘गीत गजल’ बन्ने
Posted: 2018-08-30 10:16:33
सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं - नितिन चन्दको निर्देशनमा नयाँ फिल्म ‘गीत गजल’ निर्माण हुने भएको छ । दुई नयाँ कलाकारलाई डेब्यु गराउँदै उनले गीत गजल निर्देशन गर्न लागेका हुन् । यस फिल्मबाट रुप पोखरेल र आरोही सिंहले डेब्यु ...